Chii chekuita kana iwe wakakanganisa mumusika wekutengesa? Mimwe mhinduro | Ehupfumi Zvemari
Chii chekuita kana iwe wakakanganisa mumusika wemasheya? Mimwe mhinduro
Rimwe rematambudziko rinosanganisirwa nechero musika wemasheya nderekuti unokanganisa pakutenga pamutengo wemusika. Ndokunge, mushure memasangano akati wandei ekutengesa iwo mutengo uri pazasi chaizvo weyakagadziriswa mukutora kwayo. Nemhedzisiro yekurasikirwa kwemari uko kunogona kuita kuti iwe urasikirwe akawanda maeuro mumafambiro anotyairwa mumisika yemari. Nechokwadi chese, iwe uchave wakasangana nezviito izvi muhupenyu hwako semudiki uye wepakati investor uye iwe uchave wakasimbisa kuti kunetsekana kunenge kwagadziriswa mune yako mamiriro epfungwa.
Saka kuti iwe ugone kugadzirisa aya matambudziko mukudyara mumisika yemari, tiri kuenda kuzopa mhinduro dzakateedzana kuyedza kurerutsa chiitiko ichi izvo zvinogona kuitika nemamwe mafrifits mune ako mashandiro pamusika wemasheya. Nekuti zvirizvo, kuburikidza nenzira dzakasiyana iwe unenge uri muchinzvimbo, zvirinani kudzikisira kurasikirwa kunogona kugadzirwa mune yako machengetedzo account kubva zvino zvichienda mberi. Kunyangwe kune izvi iwe unofanirwa kuwana humwe hunyanzvi mukutungamira kweiyi yemari nhumbi yakakosha kukosha.
Hatigone kukanganwa kuti kumwe kwekukanganisa kukuru kunoitwa nevashambadzi vadiki nepakati kuvhara nzvimbo pamusika wemasheya kana zvinhu zvatanga kushata. Ndokunge, apo shanduko yemari mumisika yemari haina kuita sezvawaishuvira kubva pakutanga. Chero zvazvingaitika, chinhu ichi chinogona kuve chakajairika mune zvimwe zviitiko nekuti haufanire kuita kuti mashandiro abatsire mushure mekuita kutenga. Zvinogona kutora mavhiki mazhinji kana kunyangwe mwedzi kuti chirevo chemari ive munzvimbo yakanaka.
1 Mhinduro: chinja mazuva ekupedzisira
2 Tora mukana wemutengo mabhureki
3 Chinja imwe kukosha kweimwe
4 Ita kuti zvibatsire pamwe nemugove
5 Zvigadzirise mune zvemari
Mhinduro: chinja mazuva ekupedzisira
Zano rakapusa rekushandisa kana kuita rinoitwa rinogadzirwa kuburikidza nemusiyano wezvekugara zvachose. Kana iwe ukaona kuti uri kurasikirwa nemari mumusika wemasheya mangwanani-ngwanani, pachinzvimbo chekufunga kwenguva pfupi yekudyara, sezvaive chishuwo chako chekutanga, unogona wedzera kune dzimwe nguva refu, senge yepakati uye yakareba. Neiyi nzira ine simba, iwe unodzivirira kuve nekuita zvinotyisa kutengesa pamitengo yemusika inoisa zvikwereti zvakakomba pane chirevo chemari yeakaundi account yako. Iwe unongofanirwa kushandura iyo chip maererano nezvinangwa zvako mumisika yequity.
Kune rimwe divi, kuita iyi yakasarudzika nzira yekudyara ichakubatsira iwe kuona musika wemasheya zvakasiyana. Kunyanya kudzikama uye pasina iva nekumwe kukurumidza kupedzisa mashandiro mune imwe nguva shoma kana shoma. Hazvishamisi kuti kudyara mumusika wemasheya mune yepakati nepakati yakareba kazhinji kune magumo anogutsa ekudzivirira zvaunofarira. Iwe unongofanirwa kushandura chimiro chako sediki uye wepakati investor kuti uzvitungamire kune imwe yakanyanya kuzvidzivirira kupfuura kusvika zvino. Iyo sisitimu iyo isingatombokundikana.
Tora mukana wemutengo mabhureki
Chechipiri zano rekudyara iwe raunogona kuita kubva zvino zvichienda mberi ndere iro rine chekuita naro kutengesa zvinhu. Kana kurasikirwa muzvigaro zvako zvisina kutaurwa zvakanyanya, iwe uchagara uine zviwanikwa zviripo uye tora mukana wezvakadzoreredzwa kugadzirisa zvigaro zviri muukoshi. Usave nekusahadzika kudiki kwekuti izvi zvinodzokororwa, munguva pfupi, kana zvichazotevera, zvichaonekwa pane imwe nguva, kunyangwe kana kukosha kuri mune yakadzika tsika. Kunyangwe chiri chokwadi kuti vanogona kubuda vaine kukura kukuru kana kushoma, zvinoenderana nemamiriro emisika yemari. Izvo ndezve zvingangoita kudzikisira iyo inogona kurasikirwa iyo iwe yaunogona kuburitsa mune ako mashandiro mumisika yequity.
Dambudziko guru iwe uchafanirwa kuita ino sisitimu kana paine kukanganisa mukusarudza kwekuchengetedzeka mune yako yekudyara portfolio kuziva kuti mune kupi rebound iwe kwaunofanirwa kuisa yako yekutengesa odha. Hazvishamisi kuti iwe unogona kufungidzira mutsauko uripakati pe5% ne10% pachiyero mune yako statement statement. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kana kupotsa iyi rebound mumitengo kana iwe ukatora nguva refu kuti ushandise zano iri, izvo zviri nyore kwazvo kugadzirisa. Iko kusiri kudikanwa kuti iwe umhanye mutengo wekutanga nekuti zvazviri pakupedzisira hazvisi zvekurasa euro mukuita mumusika wemasheya.
Chinja imwe kukosha kweimwe
Izvo hazvikwane iyi ndeimwe yemhinduro dzakaomarara kuti uzviite nekuti zvinoda kudzidza kukuru mukushandisa kwayo. Ndipo paunosarudza kukosha kuti chero mamiriro ezvinhu anyurwe mu yakadzika downtrend Uye izvo zvinogona kukutora iwe kudzika zvakanyanya muchitau chako kupfuura pauri izvozvi. Mune ino kesi, mhinduro ndeye kungochinja kukosha kwemusika kuenda kune imwe inoratidza zvirinani zvehunyanzvi chimiro uye kana zvingave zviri kumusoro, zvino zviri nani pane zvirinani. Hazvishamise kuti panogona kuve nemusiyano wemayuro mazhinji kuve mune imwe kana imwe nzvimbo mumisika yemari.
Izvo zvinongoreva chete diki rekuwedzera mari mu makomisheni ekutenga nekutengesa zvikamu semhedzisiro yekuchinjiswa kwemasheya mumisika yemari. Zvichienderana nehuwandu hwekushanda, inogona kunge iri huwandu huri pakati pe30 ne100 euros angangoita. Izvi zvinoreva kuti, inofungidzirwa zvizere kune huwandu hweimwe yekufungisisa uye kuti kune rimwe divi iwe unodzikamisa munguva pfupi pfupi yenguva. Iwe haufanire kutya kuisa nzira yekudyara iyi mukuita nekuti urikutamba mari yakawanda mune ino yakakosha mamiriro.
Ita kuti zvibatsire pamwe nemugove
Hapana mubvunzo kuti kuchengetedzeka uko kunogovera zvikamu pakati pevachagovani vako kunokutendera iwe dziviriro huru mune zvako zviito. Nekuti kunyangwe iwe uri kurasikirwa nemari mukotesheni yemitengo yemigove, unogona kuvarerutsa kuburikidza nemubhadharo uyu paakaundi inoitwa nguva nenguva gore rega rega. Chero chii chinoitika mumisika yemari. Nechido chakasimbiswa uye chakavimbiswa chiri mukati mehurefu icho inofamba pakati pe3% ne10%, zvichibva pane zvakasarudzwa zvemari midziyo. Zvekuti nenzira iyi, mukupedzisira chirevo chako chemari chiri munharaunda yakanaka.
Kune rimwe divi, iko kuunganidzwa kwezvikwereti kunodzora kushomeka kwauinako mumabasa emusika wemasheya. Kusvika pauya poindi yauinayo yakabvisa kurasikirwa kwese pasina kuziva. Iyo sisitimu inoshandiswa nevachengeti vanonyanya kuzvidzivirira mumisika yemari. Iko kune njodzi kuri kushoma, kunyangwe iwe uchifanira kuwedzera nguva yekugara nenzira yakakosha. Zvakare kukudziridza yakatsiga mari yekutsinhana kwenguva yepakati nepakati uye pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvekufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Zvigadzirise mune zvemari
Panyaya yakaipisisa, imwe yemhinduro dzauinadzo kudzikamisa kana kudzima kurasikirwa kwako kunoenderana nechinhu chakajairika sekukubhadhara iwe kubva pamutero wekutarisa. Kubudikidza neyako inotevera mari chirevo uye zvinoenderana neyako inodzokera kubasa uye capital. Mune ino pfungwa, zviri nyore kwazvo kuzviisa iwe mumaoko emubatsiri wezano kuti akutungamire pane izvo zvaunofanirwa kuita mune ino mamiriro. Nekuti usakanganwa kuti kana iwe uine kurasikirwa mumusika wemusika, hauna zvese zvakarasika. Iwe unogara uine mari yezvemari yekuedza kutendeuka mamiriro azvakatangira muzvikwereti zvako.
Ndichiri kune rimwe divi, haugone kukanganwa kuti chinhu ichi chinogona kuve chakanakira iro rinotevera gore remari chero bedzi richiperekedzwa neimwe dhata mune yako mari uye zvakabviswa mukugadzirisa yeakaundi ako ega. Chero zvazvingaitika, iwe unenge wakwanisa kuona mune ino chinyorwa kuti kune mhinduro dzemhando dzakasiyana kugadzirisa iyi mamiriro isinganyanyodiwa kune vashoma nepakati varimi. Uye kuti pane imwe nguva muhupenyu hwako zvichave zvakaitika kwauri. Nemhedzisiro inogona kuve yakaipa kwazvo kana ukasasvika kune imwe mhando yesarudzo yekucheka kurasikirwa uku mukudyara.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuongorora kana kurasikirwa uku mumisika yemari kuchikanganisa chidiki kwazvo kana kana, zvichipesana, chiri chehukuru hwakanyanya. Nekuti mune ese kesi, hapana mubvunzo kuti iwe uchave neimwe nzira yekurapa uye inogona kutonyanya kuve yakasarudzika. Nekuti iwe haufanire kukanganwa kuti mukupedzisira izvo zviri kugadzirisa dambudziko iri rakakomba iro rinogona kuunzwa kune yakawanda yakanaka mari. Kunyanya, muzviitiko zvakanyanya kwazvo mavari uye izvo zvinogona kutora mitengo yavo kudzikira zvakanyanya kupfuura zvavari panguva ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chekuita kana iwe wakakanganisa mumusika wemasheya? Mimwe mhinduro
5 Spanish masheya ekugadzirisa kudzikira kwehupfumi
Zvigadzirwa zvekudyara muzvikwereti